Xisbiga Mucaaradka Israa’iil wuxuu u adeegsadaa Veto Xuquuqda Xakamaynta Xashiishadda • Daroogada Inc.eu
Xisbiga mucaaradka Israa’iil wuxuu adeegsadaa diidmada qayaxan ee diidmada xashiishadda
Mudanayaasha baarlamaanka Israel ayaa u codeeyay soo jeedin u ogolaan laheyd haysashada iyo isticmaalka xashiishad yar. Haddii soo jeedinta la meel mariyey, biilka sidoo kale waa la ansixin lahaa CBD dib loo qoondeeyay.
Isbahaysiga maamulka ayaa la kulmay guuldarro markii soo jeedintooda ah in la xukumo haysashada xashiishadda madadaalada ee ilaa 50 garaam iyo illaa 15 abuur ah ayaa shalay loo codeeyay 52 illaa 55.
Kadib isku daygii dhicisoobay, isbahaysigu waa inuu sugaa ugu yaraan lix bilood oo kale ka hor intaan biilka dib loogu celin miiska Knesset (baarlamaanka Israel).
Dadka ka soo horjeestay soo jeedinta waxaa ka mid ahaa xubno ka tirsan xisbiga Likud, oo horay u taageeray qorshayaasha lagu beddelayo siyaasadda xashiishadda ee dalka.
Gudoomiyaha xisbiga Yariv Levin, si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in codbixintu ay ahayd "guul weyn oo ay gaareen mucaaradka" iyo in xisbigu "uu sameyn doono wax walba" si loo rido isbahaysiga cusub, oo uu ugu yeeray "dowlad nacayb".
Hindise sharciyeedka waxaa soo saaray New Hope MK Sharren Haskel, oo tiri: “Fiiri indhaha dadka aad dooraneysaan una sharax sababta aad u caawiseen in ka badan hal milyan oo muwaadiniin ah Israa'iil khaldan, iyo tobanaan kun oo bukaanno xashiishad caafimaad oo kale ah, carruur maanta fadhiya guriga oo leh suuxdin nafta halis gelinaya oo aan wax daawo ah gacmahaaga ku jirin ”.
Toddobaadyadii la soo dhaafay waan kula soo xaajooday, waxaad heshay soo-jeedin ballaadhan oo ku saabsan iskaashiga arrimaha sharci-dejinta iyo xitaa jagooyinka guddoomiyeyaasha guddiyada Knesset, laakiin waxaad ka dooratay tixgelinno shaqsiyeed siyaasadeed danaha guud ee bulshada iyo sharci aad adigu leedahay naftaada ayaa aaminsan inay lagama maarmaan tahay. ”
"Waxaad ku guuleysatay guul yar oo siyaasadeed, laakiin waxaad sameysay cadaalad daro weyn oo ah qaab baarlamaaneed iyo mid aan baarlamaani ahayn."
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), JerusalemPost (EN), Waqtiga Israel (EN)
cannabisgo'aan qaadashoIsraa'iilsharciyeyntasharci-dejintadaawo cannabisdaawada cawskasiyaasaddasharciga
Israail waxay siisaa iftiin cagaaran dhoofinta xashiishadda caafimaad
Soosaarayaasha xashiishadda Israel ayaa loo oggol yahay inay dhoofiyaan alaabada kadib markay ruqsad ka helaan Wasaaradda Caafimaadka.
Switzerland waxay si rasmi ah u bilaabeysaa nooc tijaabo ah suuqa xashiishadda madadaalada ee sharciga leh May 15. Federaalka Switzerland ...